COl. Barre Hiiraale oo weerar gaadama ah ku qaaday Col. Cigaal oo xagga fikirka uga soo horjeedo
Buluugleey, December 3, 2005
Maleeshiyooyinka ka amar qaata Col.Cabdi Cigaal Jaamac ay bilaabeen in ay dib u isku abaabulaan kadib markii xalay weerar lagu soo qaaday guriga uu Col.Cigaal ka degan yahay magaalada Kismaayo.
Sida uu Col.Cigaal u sheegay warbaahinta ayaa weerarka waxaa ku soo qaaday maleeshiyooyin ka amar qaata Guddoomiyaha Isbaheysiga Dooxada Jubba Col. Barre Hiiraale. Weerarkaas ayaa wuxuu sababay dhaawac loo geystay mid ka mid ah maleeshiyooyinka Cigaal, halkaasna kama dhicin wax dhimasho ah.
Dagaalkan ayaa waxaa lagu beegay saqdii dhexe wakhti la hubiyey in Col. Cabdi Cigaal uu ku sugnaa gurigiisa. Falkaas gaadmada ahaa ee la soo qorsheeyey in lagu dilo Col. Cigaal ayaan u dhici sidii loogu tala galay. Weerarka kadib, waxaana la xaqiijiyey in Korneel Cigaal uu ka badbaaday isagoo nabad qabana uu ku soo laabtay gurigiisa.
Dhacdadaas isku dayda weerarka gaadmada ahaa ayaa la aaminsan yahay in ay ka danbeysay fikirka ay ku kala duwan yihiin Cigaal iyo Barre Hiiraale. Korneel Cigaal ayaa qaba in waqtigan la joogo aysan habooneen in uu Barre Hiiraale uu martigeliyo Col. Cabdullaahi Yusuf oo aysan u cadeyn Cigaal ujeedada ka danbeysa martigelintaas. Col. Cigaal ayaa waxay ugu muuqataa in kulankaas lagula hadlayo garabka Jowhar in looga danlee yahay in lagu qeybiyo isbaheysiga oo ka kooban kooxo aan isku heyb ahayn. Col. Cigaal ayaa wuxuu cabsi ka muujiyey siyaasadaha aan bisleyn ee uu Barre Hiiraale ku damacsan yahay inuu isbaheysiga ugu wareejiyo Col. C/aahi Yusuf iyo loogana soo arimiyo isbaheysigaas xaruunta Jowhar.
Waxaa marar badan soo baxay siyaasiyiin badan oo ka tirsan isbaheysiga sida aysan ula dhacsaneyn qaabka uu wax ku maamulayo Barre Hiiraale, kuwaas oo ay ka mid yihiin Col Jees, Janaraal Morgan, Janaraal Axmed Warsame iyo Col. Seeraar. Waxeyna taas u muuqataa in Barre Hiiraale uu doonayo mucaaradka xoogan ee ka heysta gudaha isbaheysiga iyo kan deegaanka inuu uga gudbo qabanqaaba uu ku doonayo inuu siyaasada isbahesiga u raro dhinaca kooxda Jowhar.
Dadka Barre Hiiraale ay isku heybta yihiinin kalana tirsan maamulka isbaheysiga ay diidmo xoogan kala horyimid. Khilaafkaas xoogan ee ka dhex jira maamulka isbaheysiga ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhexdhaliyo isbaheysiga dhexdiisa dagaal u kala jebiya kooxo ku dagaalama gacan ku heynta isbaheysiga. Waxa haddaba bilaaban tay qaban qaabada nuucaasa oo ka socota gudaha Magaalada Kismaayo, kuwaas oo ay isku diyaarinayaan maleeshiyada uu kasoo jeedo Col.Cabdi Cigaal Jaamac.
Colaadan cusub ee ku soo korortay isbaheysiga, una dhexeysa madaxda sare ee ay isku heybta yihiin Barre Hiiraale ayaa a maleynayaa in uu ka danbeeyo Col. Cabdullahi Yusuf.